#Real Madrid Oo Xaqiijisay In Cristiano Ronaldo Uu Ku Biiray Kooxda Juventus | Get Latest News From Horn of Africa |
Kooxaha Real Madrid iyo Juventus ayaa si isku mid ah uwada xaqiijiyay inay ka heshiiyeen iibka Cristiano Ronaldo, islamarkaana 33-sano jirkaan uu usoo wareegayo Naadiga ka dhisan gobolka Turin ee wadanka Talyaaniga.
Wararka ayaa sheegay in Kabtanka xulka qaranka Portugal lagu iibsaday qiimo lacageed dhan 105 Milyan oo Yuuroo, islamarkaana uu mushaar ahaan u qaadan doono sanadkii 30 Milyan oo Yuuroo.
Ronaldo oo Sagaal sano la joogay kooxda reer Spain ayaa wuxuu u dhaliyay 451 gool, isagoo kula guulestay 16 koob, xili uu sanadkii 2009-kii uga soo biiray kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska.
Xiligaas waxay kusoo iibsatay Los Blancos aduun lacageed dhan 90 Milyan, tani oo ka dhan in macaash dhan 15 Milyan ay ka heshay iibkiisa, wallow qiimaha lagu iibsaday lagu sheegayo mid jaban/raqiis.
Waa ciyaaryahanka ugu gooldhalinta badan taariikhda Madrid, isagoo Shan goor noqday xidiga aduunka ugu wanaagsan, oo uu kala siman yahay xidiga Barcelona ee Lionel Messi.
– Maxaa sababay bixitaanka Ronaldo? –
Sida iska cad, maamulka Real Madrid iyo Ronaldo xiriirka ka dhaxeeya wuu xumaa tan iyo bilowgii sanadkaan, iyadoo sababta ugu wayn ay tahay inay isku qabteen mushaar kordhin uu CR7 codsaday.
Sida la sheegay, Milkiilaha Madrid ayaa balanka uga baxay Ronaldo, kaasoo sanadki 2017 u balanqaaday in sare loo qaadi doono Gunadiisa, hadii uu kooxda u qaado Champions League 2018, taasoo dhacday.
Maamulka Madrid ayaa qiil uga dhigay balan ka baxooda in Ronaldo yahay mid 33-sano jir ah, islamarkaana aysan qarash badan ku bixin karin in ciyaaryahan ay da’da ka daba timid.
Sikastaba, Madrid oo bayaan kasoo saartay bixitaanka CR7, oo ay ku xaqiijisay inuu tagayo Ronaldo ayaa waxay uga mahad-celisay guulaha uu soo gaarsiiyay mudadii uu la joogay.
Sidaasi si lamid ah, Ronaldo oo dhankiisa war-saxaafadeed soo saartay wuxuu xaqiijiyay in dalabka bixitaanka uu dhankiisa ka yimid, islamarkaana uu u mahad-celinayo siday uga aqbalay maamulka.
Wuxuu noqonayaa ciyaaryahankii ugu sareeyaa ee kubada cagta Talyaaniga kasoo muuqda kadib sanaddo badan, maadaama dhawaanahaan uu ahaa horyaalka Italy mid liita.